इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी)
आईपी ​​के हो?
"आईपी" कम्प्यूटर नेटवर्कको सन्दर्भमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ। आईपी इन्टरनेट प्रोटोकॉलका लागि खडा छ, र यो नियमहरूको सेट हो जसले निर्णय गर्दछ कि डेटा पैकेटहरू कसरी सञ्जाल मार्फत जान्छ। यसले हामीलाई प्रत्येक नेटवर्कलाई विशिष्ट रूपमा पहिचान गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। इन्टरनेट वा सञ्जालमा उपकरण। हामी आईपी, आईपी को प्रकार र यसको सम्बन्धित अन्य सर्तहरू मार्फत जान्छौं, र बुझ्न किन यो सञ्जाल सञ्चारको एक आवश्यक भाग हो। आईपी प्रोटोकॉल भनिन्छ नियमहरुको एक संग्रह हो। प्रोटोकॉलले केहि मानकहरू परिभाषित गर्दछ जसको अनुसार सञ्जाल कार्य र सञ्जालहरूमा डाटा प्याकेट स्थानान्तरणहरू यन्त्रमा स्थानान्तरण गर्दछ। यस समयमा, सञ्जाल यन्त्रहरूको धेरै निर्माताहरू छन्, र प्रत्येकमध्ये उनीहरूको प्रविधि, अपरेटिङ सिस्टम, र आर्किटेक्चर छन् जुन तिनीहरूले प्रयोग गर्छन्। आफ्नो उपकरणहरू निर्माण गर्न, तर जब तिनीहरू सञ्जालमा घुमाउँछन्, तिनीहरू इन्टरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) द्वारा बनेका केही मानकहरू पालन गर्न पर्दछ। सबै उपकरणहरू तिनीहरूको प्याकेटहरू IP ठेगानाहरूमा आधारित छन्।
आईपी ​​ठेगाना र यसको प्रयोग
प्राविधिक रूपमा, एक आईपी ठेगाना एक अद्वितीय 32-बिट संख्या हो जुन उपकरणमा सञ्जाल हुँदा सञ्जालसँग जोडिएको छ। घरको ठेगानाको रूपमा विशिष्ट भौतिक स्थान पहिचान गर्न प्रयोग गरिन्छ जस्तै आईपी ठेगानाले यन्त्रको लागि अनौठो पहिचानको रूपमा काम गर्दछ। यो ठेगाना प्रयोग गरेर, यन्त्र डेटा प्याकेटहरूको प्रेषक र रिसीभरको ठेगानाको सङ्केत गर्दछ। सञ्जाल डेटा प्याकेट डेटाको एकाइ हो जुन IP आधारित सञ्जालमा नियन्त्रण जानकारी र प्रयोगकर्ता डेटाको काम गर्दछ। जब डेटा एक उपकरणबाट अर्को उपकरणमा पठाइएको छ, तपाईंको PC ले होस्टनाम हेर्नका लागि यसको IP ठेगाना पत्ता लगाउन DNS सर्भर प्रयोग गर्दछ। आईपी ​​ठेगाना बिना, नेटवर्कमा यन्त्र पहिचान गर्न सकिँदैन र कुराकानी गर्न सक्दैन। यद्यपि, यो उपकरण र सञ्जाल अनुसार भिन्न हुन सक्छ। एकै समयमा, तपाईंको पीसीमा एक भन्दा बढी आईपी ठेगाना हुन सक्छ। एक को लागि LAN र इन्टरनेट को लागि अन्य। यी IP ठेगानाहरू थप दुई मुख्य प्रकारहरूमा विभाजित गरिएका छन्:
स्थिर आईपी ठेगाना
नामको प्रतिनिधित्वको रूपमा, स्थिर आईपी ठेगानाहरू IP ठेगानाको प्रकार हो जुन जुन एक पटक नेटवर्कमा एक पटक मिलाईएको बेलामा कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। तथ्याङ्क आईपी ठेगाना यति महंगी छैन तर सञ्जालमा लुकाउन चाहनेहरूका लागि सुरक्षा धम्कीहरू खुला छन्। तिनीहरू प्रायः सानो पैमानेमा वेब, गेमिंग, र इमेल सर्भरद्वारा प्रयोग गरिन्छ।
गतिशील आईपी ठेगाना
अर्कोतर्फ, गतिशील आईपी ठेगानाहरू तिनीहरूका IP ठेगाना हुन् जुन हरेक पटक उपकरणमा सञ्जाल लग राख्छ। ठूला-ठूला संगठनहरूले प्रायः गतिशील आईपी ठेगानाहरू प्रयोग गर्दछ किनभने यो स्थिर आईपी भन्दा बढी सुरक्षित छ र त्यहीं बाँकी छैन; यसैले स्थान पत्ता लगाउन सकिँदैन।
स्थिर आईपी बनाम गतिशील आईपी जो राम्रो छ?
जस्तो कि पहिले छलफल गरियो, सञ्जाल वातावरणको प्रकृति निर्णय गर्दछ, कुन आईपी को प्रयोग गर्नु पर्दछ। यदि सुरक्षा समस्याहरूसँग कुनै चिन्ता छैन र सञ्जाल मार्फत आफूलाई पत्ता लगाउनबाट लुकाउनको आवश्यकता छैन भने स्थिर तथ्यांकले तपाईंको लागि राम्रो काम गर्नेछ। तर, यदि तपाईं वेब मा आफ्नो पहिचान को रक्षा गर्न र सुरक्षित नेटवर्क ट्राफिक वातावरण को माध्यम ले जाना चाहते हो, तब डायनामिक आईपी तपाईंको लागि एक बेहतर विकल्प हुनेछ। सामान्यतया, इन्टरनेटमा ब्राउज गर्दै, फाइलहरू पठाउँदै वा फाइलहरू डाउनलोड गतिशील आईपी द्वारा गरिन्छ, अर्कोतिर, इन्टरनेट मार्फत एफटीपी, सर्भर र भ्वाइस कलहरू स्टेटिक आईपी द्वारा गरिन्छ। IPV4 र IPV6 जस्ता मानक योजनाहरू सञ्जाल यन्त्रहरूको लागि IP ठेगानाहरू उत्पन्न गर्न प्रयोग गरिन्छ। यी आईपी संस्करणहरू तल विस्तृत छन्।
IPV4 ठेगाना (इन्टरनेट प्रोटोकल संस्करण 4)
आईपीवीक्सएनमएक्स (इन्टरनेट प्रोटोकल संस्करण 4) प्वाइन्टमा यन्त्रहरूमा असाइन गर्न उत्पन्न ठेगाना प्रयोग गर्न प्रयोग भएको इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) को चौथो संस्करण हो। IPV4 ले यन्त्रहरूलाई इन्टरनेटमा जडान गर्न 4-bit ठेगाना ढाँचा प्रयोग गर्दछ। 32-बिट ठेगाना लगभग 32 बिल ठेगानाहरू उत्पन्न गर्न सकिन्छ। तथ्याङ्कले देखाउँछ कि इन्टरनेटको यस्तो ठूलो वृद्धिको साथ, IPV4 सबै यन्त्रहरू पत्ता लगाउन पर्याप्त हुनेछैन किनभने व्यक्तिगत कम्प्युटरहरू, ल्याप्टपहरू, स्मार्टफोनहरू इन्टरनेटमा जडान गर्न IPV4 प्रयोग गर्दछ। यस सीमालाई पराजित गर्न, इन्टरनेट प्रोटोकॉल संशोधित गरियो, र नयाँ संस्करण IPV4 ठेगानाहरू उत्पन्न गर्न डिजाइन गरिएको थियो।
IPV6 ठेगाना (इन्टरनेट प्रोटोकल संस्करण 6)
आईपीवीक्सएनमएक्स ठेगाना (इन्टरनेट प्रोटोकल संस्करण 6) एक नयाँ इन्टरनेटको लागी अधिक इन्टरनेट ठेगानाको आवश्यकतालाई पूरा गर्न कार्यान्वयन गर्न मिल्ने तंत्र हो। IPV6 IPV6 को परिमार्जित रूप हो र होस्टहरूको संख्या साथै डाटा ट्राफिक रूपमा अनुमति दिन्छ। IPV6 ठेगानालाई IPng भनिन्छ (अग्रेषणको इन्टरनेट प्रोटोकल) र तैनात गरिएको छ। IPV6 को IPV4 को केही फाइदाहरू जस्तै कुनै DHCP र NAT, सेवाको साँचो गुण (क्यूओएस) छन्।
TCP / IP के हो?
टीसीपी / आईपी (ट्रान्समिशन नियन्त्रण प्रोटोकॉल / इन्टरनेट प्रोटोकल) इन्टरनेटको आधारभूत प्रोटोकल हो। यो निश्चित छ कि कनेक्शन विश्वसनीय छ र कुनै प्याकेट हानि छैन। प्याकेटहरूको विफलताको स्थितिमा, यो जडानको विश्वसनीयता कोयम राख्न डेटा पुन: पठाउँछ। एक सन्देश पठाउन वा जानकारी आदान प्रदान गर्न दुई कम्प्युटरहरू जोडिएको छ, टीसीपी / आईपी कार्यक्रमको प्रतिलिपि प्रदान गरिएको छ। टीसीपी / आईपीमा दुई तहहरू छन्: उच्च परत TCP हो र सानो भागमा डेटा संकलन गर्न र सबै भन्दा टुक्राहरूलाई मूल डाटामा पुनःसम्पर्क गर्न जबकि अन्य आईपी तह प्याकेट को ठेगाना भाग को प्रबन्ध गर्न को लागी जिम्मेवार छ र यो सुनिश्चित गर्दछ कि डेटा सही गन्तव्यमा पठाइएको छ। यस प्रोटोकलको विश्वसनीयताको कारण यो प्रयोग गरिन्छ।
यूडीपी / आईपी
यूडीपी (प्रयोगकर्ता डेटाट्राम प्रोटोकॉल) TCP को प्रोटोकल विकल्प हो र डाटा ट्राफिकलाई बिना त्रुटिको जाँच गर्न अनुमति दिन्छ। यो विश्वसनीयतामा सम्झौता र प्याकेटहरूको ड्रप गर्न, तर राम्रो विलम्बता दर प्रदान गर्दछ। यसको कारण, यो गेमिंग र अनलाइन स्ट्रिमिङको लागि प्रयोग गरिन्छ।
इन्टरनेट प्रोटोकल र इन्टरनेट प्रोटोकल ठेगानाहरू कम्प्युटर नेटवर्क र कम्युनिकेशन्सको मुख्य भाग हो। तिनीहरू तिनीहरूको सम्बन्धित उपकरणहरूको बारेमा उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ र यो उपयोगी र साथसाथै सुरक्षा खतराहरूको लागि छेद छ। गतिशील आईपी र स्थिर आईपी वातावरण अनुसार चयन गरिन्छ, र डेटा प्याकेट ट्राफिकको मोड TCP / IP वा UDP / IP मोड्युल द्वारा परिभाषित गरिएको छ।